Lalam-pirenena RN-44, Alaotra : simbàna ny tetezan’i Bekatsaka ho fitadiavam-bola | NewsMada
Taona maro mifandimby, fahasahiranana na fijaliana mihitsy ny any amin’ny faritra Alaotra noho ny faharatsian’ny lalana RN-44 mankany Ambatondrazaka avy eo Moramanga. Tsy mety vita io lalam-pirenena io, lasa miteraka fanararaotana ataon’ny sasany.
Tsy hita homen-danja mihitsy, hatramin’izao, ny RN-44, iankinan-javatra maro any amin’ny faritra Alaotra, lazaina fa sompitr’i Madagasikara. Mivadika hatramin’ny toe-tsain’ny mponina sasany, vao mainka manimba izay kely vita, lasa avadika ho fitadiavam-bola. Hita izany eo amin’ny tetezan’i Bekatsaka, amboarina maraina, simba ny hariva. Misy amin’ireo mponina eo amin’ny tanànan’i Bekatsaka ihany no manao izany fanimbàna ny fananam-bahoaka izany, azo lazaina fa manana toe-tsaina mamono ny mpiray tanindrazana aminy.
Vita tamin’ny 24 febroary lasa teo io tetezana io, ny hariva ihany anefa, efa nisy nanongotra ireo tsivalan-kazo napetraka taminy. Lasa fitadiavam-bola ary fidiram-bola tsy tapaka ho an’ny mponina manodidina, izay manimba azy ihany. Tanimbary daholo ny havia sy havanana, tsy misy azo hiampitàna. Koa tsy maintsy amin’io tetezana niniana nosimbàna io ihany ny lalana. Tsy maintsy misy manoro lalana ny fiampitàna eo aminy, ary izay tafita, mandoa sarany, 500 na 1.000 Ar isaky ny fiara.
Fidiram-bola hafa fanampiny …
Mbola fidiram-bola hafa fanampiny, aman’alina ariary maromaro, raha sanatria latsaka ao anaty tetezana ny fiara. Filaharana ho an’ny rehetra ny fiampitana amin’izany tetezana izany, ary tsy afaka eo raha tsy ora maromaro. Araka izany, fidiram-bola hafa fanampiny eo an-tanànan’i Bekatsaka izay filaharana izay, amin’ny sakafo ho an’ireo mpandeha. Fahavoazan’ny sasany, fidiram-bola ho an’ny hafa !
Endriky ny tsy fanarahan-dalàna, fangalarana fananam-bahoaka miampy fanararaotana ny fahavoazan’ny hafa ny zava-misy eo amin’ny tetezan’i Bekatsaka. Tsy hita izay fepetra noraisin’ny sampandraharaham-paritra ny asa vaventy ao Alaotra hisorohana izany. Koa andrasana ny fampiharan-dalàna, raha mbola misy tokoa izany lalàna izany.